मंसिरमा बिबाह गर्दै आँचल शर्मा ! - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com मंसिरमा बिबाह गर्दै आँचल शर्मा ! - नागरिक रैबार
काठमाडौं । हरेक वर्ष मंसिर लाग्दै गर्दा अभिनेत्रीका बिबाहको चर्चा चल्ने गरेको छ । यो बर्षपनि यस्तै चर्चा हुन थालेका छन् । गत साता पोखरामा ब्याचलर पार्टी दिएकी ऋचा शर्मा अहिले बिबाह तयारीमा जुटेकी छन् । मंसिर अन्तिमसाता उनले बिबाह गर्ने समाचार बाहिर आएको छ ।
ऋचाको बिबाहको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अर्की अभिनेत्री आँचल शर्माले पनि घरजम बसाउन लागेको समाचार मिडियामा चाउन थालेका छन् ।आँचलले डा.उदीप श्रेष्ठसँग घरजम बसाउन लागेको हुन् । एक वर्षदेखि उदीपको प्रेममा रहेकी आँचल अहिले प्रेमका विषयमा समेत खुल्न थालेकी छन् ।
साँफेमा महिला खुल्ला भलिवल प्रतियोगिता हुने